I-bug kwi-Vivo NEX ibangela ukuba ikhamera ebuyisekayo isebenze ngaphandle kwesixwayiso | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Mva nje IVivo isungule Ndihlala NEX, Isiphelo esiphakamileyo ngekhamera ebuyisekayo ephelise isidingo senkampani yokuphumeza uyilo lwenotshi oludumileyo oluhamba kwintengiso ye-smartphone yehlabathi, ukuze lisinike iphaneli yangaphambili enescreen esihlala phantse kuyo yonke indawo. Ikhamera iyaphuma iyokwenza umsebenzi wayo ngalo lonke ixesha isicelo sinemvume siyifuna.
Ngokwezinye iingxelo, ingxaki enxulumene nekhamera yefowuni ibangela ukuba ikhamera yangaphambili yeVivo NEX ivele nokuba umsebenzisi akenzi ntshukumo.. Oku kuyenzeka xa kuvulwa incoko kwiTelegram. Abanye abasebenzisi bayakhalaza ngempazamo efanayo xa besebenzisa isikhangeli seQQent kunye ne-Ctrip app.
Ividiyo yale mpazamo ithunyelwe ngumsebenzisi kwi-Weibo, inethiwekhi yoluntu yaseTshayina, ebonisa oko ikhamera yangaphambili ivela ngaphandle kwentshukumo efanelekileyo yomsebenzisi ngelixa usebenzisa i-app yemiyalezo yeTelegram ngokwesiqhelo. Xa umsebenzisi evula isicelo seTelegram kwaye eya kumyalezo omtsha, emva koko ucofe kumfowunelwa ukuvula incoko entsha, ikhamera iphuma kwangoko. Ibuyela ekufihleni akuba umsebenzisi ephume kwiapp.
Kwelinye icala, u-Tencent, kwingxelo, uthi nangona umkhangeli weQQ evula ikhamera ye-selfie, ayirekhodisi nantoni na. I-Tencent isola i-API yekhamera enciphayo ngalo mbandela. Ibango lokuba i-API inyanzelisiwe ngenxa yohlobo lokuskena lwekhowudi ye-QR yesikhangeli esiphathwayo, kodwa oku akufuneki kwenzeke. Ngenxa yoku, isithethi se UVivo uthi inkampani iazise iqela lobuchwephesha ngazo zonke ezi ngxaki kwaye iya kubonelela ngohlaziyo kungekudala ukusombulula le micimbi.
I-Vivo NEX isandula ukwaziswa e-China ngeendlela ezimbini zokukhetha imibala: I-Diamond emnyama (emnyama) kunye neRuby Red (ebomvu). I-smartphone iya kuphehlelela e-India ngoJulayi 19 kwaye iVivo sele ithumele izimemo kumajelo eendaba kulo msitho. Nangona kunjalo, akukaziwa ukuba inkampani iceba ukumilisela zonke iVivo NEX kweli lizwe. Yintoni egqithisile, Inkqubo yelizwe jikelele iyacwangciswa, yiyo loo nto inokufunyanwa kungekudala kwamanye amazwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-bug kwi-Vivo NEX ibangela ukuba ikhamera ebuyisekayo isebenze ngaphandle kwesilumkiso